Nhau - BBMG Boka ra2020 Kumusoro 500 Chinese Enterprises Rankings Akasvika paNew High
BBMG Boka ra2020 Kumusoro mazana mashanu emaChina maEnglish Enterprises Rankings Akasvika kune Nyowani Yakakwirira
Kubva munaGunyana 27 kusvika 28, iyo "2020 China Yakakwirira 500 Enterprises Summit Forum" yakaitirwa neChina Enterprise Confederation uye China Entrepreneurs Association yakaitirwa muZhengzhou. Vanhu vanopfuura chiuru nemazana maviri, kusanganisira vanamuzvinabhizimusi vazhinji, nyanzvi dzakakurumbira uye vadzidzi, pamwe nevamiriri venhau kubva kumabhizimusi epamba mazana mashanu, vakapinda musangano uyu vakataura nezvekuvandudzwa kwekambani. Wang Zhongyu, Mutungamiri weChina Enterprise Confederation uye China Entrepreneurs Association, akapa chirevo chakakosha pamusoro wenyaya we "Kutarisana Nezvinetso seKushingairira Kugadzira Tarisiro Nyowani yeKusimudzira Kwemabhizimusi Makuru".
BBMG inosvika zana nemakumi masere pakati pemakambani epamusoro mazana mashanu echiChinese mu2020 nekuita kwakanyanya, kukwira nzvimbo nhatu pagore. yakarongeka 74th pakati pekambani mazana mashanu ekuChina ekugadzira mu2020, kumusoro nzvimbo ina gore-ne-gore; yakarongwa pakati pemabhizimusi zana anotungamira mumaindasitiri eChina ari kusimukira mu2020 Akaiswa makumi mashanu neshanu, kukwira nzvimbo nomwe pagore, uye ese matatu masosi akavandudzwa achienzaniswa ne2019. Mukutarisana nenzvimbo yakaoma uye yakaoma yekunze nharaunda, bhizimusi guru reBBMG rine yakawedzeredzwa zvakanyanya, ichiratidza kubudirira kweshanduko uye hunyanzvi.
Musoro wedare remusangano uyu "Dzidzo yemichina mitsva: kuvandudzwa kwemabhizimusi makuru mukuchinja". Vatori vechikamu vakatarisawo pa "Yakakwira-mhando Kugadzira Kwekuvandudza Foramu", "Kugadzira michina mitsva nekuvhura mitambo mitsva, uye nekuchimbidza kusimudzira kweindasitiri yeruzivo yemagetsi." Iyo "Yechina Ruzivo Rwekuchengetedza Indasitiri Yekuvandudza Foramu" uye "Kuvakwa kweKunowirirana Kwevashandi Hukama muEmabhizinesi pasi peiyo Nyowani Yekuvandudza Pateni" uye mimwe misoro yakachinjana zvizere, uye ivo pamwe chete vakakurukura kufunga kwekufunga kwekurima mikana mitsva uye kuvhura mitambo mitsva mukuchinja mamiriro . BBMG ichatora mukana uno kuenderera mberi nekusimudzira mhando yepamusoro yeboka, zviyero zvepamusoro nekusimudzira kwakasimba, uye kuyedza kuumba mamiriro matsva ekuvandudza kwepamusoro-soro kweboka.
Chikumbaridzo chemakambani epamusoro mazana mashanu echiChinese muna 2020 ndeye 35.96 yuan yuan mumari yekushandisa. Iwo makambani akasarudzwa akawana mari yakazara ye86.02 trillion yuan, kuwedzera kwe6,92 trillion yuan pamusoro pegore rapfuura, uye mwero wekukura we8.75%.